ပုစွန်စာရွက် ကပေးတဲ့ အလှအပ ......... - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 21/09/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ပုစွန်စာရွက် ကပေးတဲ့ အလှအပ တွေက ဘာတွေများလဲ ……… ပုစွန်စာရွက် လို့ ပြောလိုက်ရင် ဘယာကြော်ထဲမှာ ထည့်ကြော်ထားပြီး ခပ်ကြွပ်ကြွပ်လေးနဲ့ စားကောင်းတာကို ပြေးမြင်မယ် ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ အာလူးလေးနဲ့ ကြော်စားတာပါ။ စားလိုက်ရင် သဘာဝရဲ့ မြေသင်းနံ့လို ခပ်သင်းသင်း ရနံ့လေးကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ စားလို့လည်း ကောင်းသလို အရသာလေးလည်း တော်တော် ရှိတာပါ။
ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးများသလို အလှအပအတွက်လည်း အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတဲ့ ပုစွန်စာရွက်လေးက အလှအပကို ဘယ်လို အားဖြည့်ပေးသလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ပုစွန်စာရွက် ကို တော်တော်များများ မြင်ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အရွက်စိမ်းရင့်ရင့် ချွန်ချွန်လေးနဲ့ အရိုးလေးက ခပ်ပွပွလေးပါ။ အပွင့်ဖြူဖြူလေးတွေ ပွင့်တတ်ပြီး မြေမှာ ကပ်ပေါက်လေ့ရှိတဲ့ အပင်တစ်မျိုးပေါ့။ ကန်ဘောင်တွေ၊ လယ်ကန်သင်းရိုးတွေမှာ တွေ့ရများပါတယ်။
ပုစွန်စာရွက် က အလေ့ကျပေါက်ပင် တစ်မျိုးဆိုပေမယ့် အခုလိုမျိုး အသားအရေ ကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုများ ထောက်ပံ့ပေးတာလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်လား…….
ပုစွန်စာရွက် သတ္တုရည်ကို သန့်စင်ထားတဲ့ အရေပြားပေါ် လိမ်းပေးတာက အရေပြားကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ပုစွန်စာရွက် မှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင် ကြွယ်ဝတာကြောင့် အရေပြားကို ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် ထိခိုက်မှု မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးပြီး အရေပြားကို ကျန်းမာစေဖို့ အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အလှအပ အာနိသင် တစ်ခုက အရွယ်တင် နုပျိုစေတာပါ။ ပုစွန်စာရွက် က ကော်လာဂျင် ထွက်ရှိမှု တိုးအောင် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး အရေးအကြောင်း ကင်းလို့ အသားအရေကို တင်းရင်း လှပစေပါတယ်။
အသက်အရွယ် ရလာတဲ့အခါ မျက်လုံးအောက်မှာ ဖြစ်လာတတ်တဲ့ မျက်အိတ် ဖောင်းဖောင်းတွေကို သက်သာစေဖို့အတွက်လည်း ပုစွန်စာရွက် ကို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်က ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေဖို့လည်း ပုစွန်စာရွက်ကို အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
ပုစွန်စာရွက် က ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေစေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဝက်ခြံတွေ သက်သာစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံကြောင့် နီမြန်းတာ၊ ရောင်ရမ်းတာတွေကို သက်သာစေပြီး ပိုးဝင်တာကြောင့် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်၊ အမည်းစက်တွေကိုပါ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အသားအရေတွေ ကြမ်းတမ်းနေတယ်။ နေလောင်ပြီး ပျက်စီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ၂ ကြိမ်လောက် ပုစွန်စာရွက် ပြုတ်ရည်နဲ့ ရေချိုးပေးပါ။ ရောင်ရမ်းတာတွေကို သက်သာစေသလို အသားအရေကို အားဖြည့်ပေးတာကြောင့် အသားအရေကို ချောမွေ့စေမှာပါ။
ကဲ……. ပုစွန်စာရွက် ကပေးတဲ့ အလှအပ ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ပုစွန်စာရွက်က စားကောင်းရုံတင် မဟုတ်ဘဲ အခုလိုလေးတွေလည်း အသားအရေကို ထောက်ပံ့ပေးပါသေးတယ်။
Beauty Benefits of Knotgrass https://www.beautysparrow.com/beauty-benefits-of-knotgrass/ Accessed Date 13 September 2021
Knotgrass Herb Uses, Benefits, Cures, Side Effects, Nutrients https://herbpathy.com/Uses-and-Benefits-of-Knotgrass-Cid2728 Accessed Date 13 September 2021